Yake vs. sudo: mutsauko uye mashandisiro ekushandisa maturusi ese | Linux Vakapindwa muropa
Su vs Sudo: mutsauko uye kugadzirisa
Imwe chinyorwa nezve yake vs. sudo. Iyo su chirongwa chinonyanya kushandiswa muUnix-senge anoshanda masystem kuti uwane semidzi uye uwane mvumo inodiwa yekuita mimwe mirairo kubva kuchiteshi uye kunyange mamwe mapurogiramu ane graphical mushandisi interface ane ekuwedzera ayo anonyatsokumbira iyi password kana zvichidikanwa.
Sezvaunenge uchitoziva, su ndicho chidanho che "chinotsiva mushandisi" (chinja mushandisi) kana super mushandisi (super mushandisi), kune akati wandei maonero. Iva zvazvingaita, izvi hazvinyanyo kukosha nezve rako bhizinesi. Chinhu chakanaka ndechekuti chinotibvumidza kutonga kwese mushure mekupinda muzasi password uye nekugadzirisa zvakawanda uye system manejimendi kuti pasina ropafadzo isu hatingatenderwe.
su –c “comando”
Chimwe chinoshandiswa sudo (super mushandisi ita), iyo yakafanana chaizvo nesu asi iine zvimwe zvinorambidzwa. Nekudaro, kunyangwe ichinyanya kuomesesa uye isingakupe kutonga kwakazara, haina kuchengetedzeka uye mashandisiro ayo anogara achirayirwa nenzira inodzorwa uye kana basa ratiri kuda risingatitenderi kuti tiite pasina ropafadzo.
Sudo rakanyorwa na Bob Coggeshall naCliff Spencer mumakore makumi masere, pavakange vari mubazi rezvesainzi yemakomputa kuNew York University. Iyo parizvino inochengetwa neimwe yevagadziri veOpenBSD, Todd c. Miller akabatana naChris Jepeway naAaron Spangler. Inoenderana neakasiyana masisitimu anoshanda, akadai seGNU / Linux, BSD uye zvigadzirwa uye Mac OS X, ...
Zvinyorwa zvakaburitswa pamusoro pemakore yakagadziridzwa uye yakagadziridzwa ye Sudo kuitira kuti ishande munzira yakanakisa uye ive yakachengeteka sezvinobvira. Nzira yekuishandisa yakafanana nesu, iwe unyore uye unyore pasiwedhi kuti uwane maropafadzo kwenguva pfupi (nguva yengoni), asi password password haina kudikanwa, chete password yemushandisi.
Nokubvumira tora ropafadzo kune chero mushandisi, Sudo haakurudzirwe uye haina kuchengetedzeka kupfuura su, sezvatakataura, asi inogona kukurumidza kana kushanda zvakanyanya mune zvimwe zvinhu Neichi chikonzero, kwete kugovera kwese kunoisanganisa. Kana iwe uchida kuti Sudo ive yakachengeteka zvakanyanya, unogona kugadzirisa iyo sudoers faira inowanikwa mune / etc dhairekitori. Aya ndiwo maratidziro aunobvisa "nguva yenyasha" yekukanganisa kuishandisa zvakaipa.
Uye pakupedzisira unonyora zvinotevera mutsara, kuremekedza nzvimbo, yepamusoro uye yepasi kesi uye pasina kukanganisa, wobva wachengeta gwaro uye ndizvozvo:
Iyo faira / etc / sudoers Iine runyorwa rwevashandisi vanobvumidzwa kumhanya kana kwete zvimwe zvirongwa uye mafaera. Nedzimwe chirongwa kana rairo inonzi "visudo" tinogona kuwedzera kugadzirisa iyo / etc / sudoers faira. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezvake nekubvunza bhuku rake rekushandisa. Chinhu chakanaka nezve visudo ndechekuti inogadzirisa iyo faira pasina njodzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Su vs Sudo: mutsauko uye kugadzirisa
Walter chena akadaro
Chinyorwa ichi chakanyanya kunaka, ini handizive zvinorehwa ne "doro", ndinofunga aireva: "doro";)
Pindura kuna Walter White
Pepe Matthias akadaro
Iwe murume, kuti chero mushandisi anogona kuwana mukana wemidzi haisi yechokwadi, mushandisi anofanirwa kuve nekodzero dzemutungamiri, kana ndikasapa kodzero idzodzo Sudo haishande.
Pindura Pepe Matias
Iko kutsvedza kwechinyorwa, ivo havana zano rezvavari kutaura nezvazvo.
Ndine chokwadi chekuti vakamboona * nix terminal muhupenyu hwavo.
Gummi: chishandiso cheLaTeX chenharaunda dzeLinux nevanyori